Previous Article Ọkụ Agbarikọọla Otu Ụlọ n'Ụmụokpu Awka
Next Article Igbu na Ịtọrọ Mmadụ N'Ime Ọnwa Anọ nke Afọ a
Ka ọ dị ta, ndị uwe ojii na steeti Anambra Steeti anwụchikọọla ndị dị iche-iche a na-enyo ènyò na ha bụ ndị ohi, ndị otu nzuzo na ndị na-apịa ụmụnwaanyị ọkụ n'ike.
Nke a bụ nke e mere ka ụwa mara site n'ozi isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti ahụ kụpụrụ nso-nso a, bụkwa nke ọ bụ onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ Maazị Harụna Mọhammed bìnyèrè aka na ya, n'aha onyeisi uwe ojii na ya bụ steeti, bụ maazị John Abang.
Ya bụ ozi kọwara na ngalaba òtù ọ ọrụ ndị uwe ojii ahụ pụrụ iche na-ahụ maka ibu agha megide ohi, bụ nke e jiri 'SARS' mara nwụchikọrọ maazị Chinedu Umerah (gbara ahọ iri na asatọ), Ọlụebube Uboh (gbara ahọ iri na isii) na Chinwendụ Obute (gbara ahọ iri na asaa) na Chukwuma Amazu (gbara ahọ iri na asaa) maka ijikọ aka ọnụ, ha na mmadụ abụọ ọzọ ka na-eri mbọmbọ ọsọ ugbua, wee gaa n'ótù ụlọakwụkwọ dị n'Ọba n'okpuru ọchịchị Idemili South, tọrọ otu nwata nwaanyị gbara ahọ iri na anọ.
Dịka ya bụ ozi sìrì kọwaa, ndị arụrụala ahụ nyèrè nwata ahụ ọgwụ ike, ọ ñụchaa, chezọọ onwe ya, tupuu ha buru ya gaa n'otu ụlọ, bụ ebe ha nọrọ wee zuru ihe niile o ji, wèré nsụnsụ égbè abụọ wee yie ya égwù na ha ga-agbagbu ya ma ọ bụrụ na o mee mkpọtụ, tupuu ha wee malitezie ịmazụrị ya nairi ya ọkọmbọ n'otu n'ótù, wee ruo ụbọchị abụọ zuru èzù.
Ndị a ka e mekwàrà ka a mara na ha jikwàrà ọnụ ha kweta na ha bụ ndị òtù nzuzo "Junior Vikings", ebe e nwètèkwàrà ègbè abụọ n'aka ha. Ya bụ nwata nwaanyị bụzị onye e bùrù gaa ụlọahụike maka inye ya ọgwụgwọ; ebe ndị uwe ojii ka na-elebà anya n'okwu ahụ, nke, mgbe ha mèchaarà ya, ha akpụpụ mkpi atọ ahụ ụlọikpe, ebe a ga-eji usoro iwu wee gụọ ha amụ.
Ozi ahụ gakwàrà n'ihu mee ka a mara na ndị uwe ojii ahụ jidèkwàrà maazị Victor Okafor (gbara ahọ iri abụọ na isii), bụ onye nwere ndị òtù ohi ya na ha sò ezu mmadụ ohi ma na-apụnarakwa ndị mmakụ 'Keke na Pep' ha na mpaghara Ọbà na ebe ndị ọzọ. Nwa amadi ahụ ka e mere ka a mara na a napụtala ótù 'Keke na Pep' enweghị akwụkwọ, bụkwa nke a na-enyo ènyò na o nwèrè ike ịbụ nzute ka o zùtèrè ya. Nnyòcha ka na-agakwazị n'ihu ugbua, ebe a ka na-agbasikwa mbọ ike ijidè ndị òtù ya ndị ka na-eri mbọmbọ ọsọ ugbua.